Semalt Inopa Zvishandiso Zvekutsvaga Kwewebhu
Tsamba dzekutsvaga webhu hunosimbiswa kuti dzibudise ruzivo kubva kune dzimwe nzvimbo uye mabhuku. Izvo zvinonziwo mapurogiramu ekukohwa kwewebhu uye webhutti yedhimwe chekushandisa. Kana uri kuedza kuunganidza dhesiyo pamusoro pewebsite yako, unogona kushandisa mapurogiramu aya ewebhu webhutori uye tora data itsva kana iripo yekuwana nyore nyore.
Nyore PHP Scraper
Ndiyo imwe yezvirongwa zvakanakisisa zvekubudisa webhu kusvika nhasi. Zviri nyore PHP Scraper inopa muvaki uye inogadzira dashaset yako nekuisa mazano kubva pamamwe mapeji ewebhu uye kutumira data ku CSVs. Zviri nyore kukanganisa mazana kuzviuru zvemawebhusayithi uye mabloggi mumaminitsi achishandisa chirongwa ichi - istick mod bending adapter. Nyore PHP Scraper inoshandisa shanduro yekutsvaga kutsvaga yakawanda yezvinyorwa zuva rega rega, izvo zvinodikanwa nemabhizimisi akawanda uye makuru makuru. Iyi purogiramu inouya zvose musingabhadhari uye yakabhadharwa uye inogona kuiswa paMac, Linux uye Windows nyore.
Fminer.com inotipa nyore kusvika kune chaiyo-nguva, yakarongeka, uye yakarongwa zvakanaka. Icho chinokwidza iyi data iri paIndaneti uye inotsigira mitauro inopfuura 200, kuchengetedza dheedhi yako mune zvakasiyana-siyana zvakadai se RSS, JSON, uye XML. Regai isu pano tiudze kuti Webhose.io ndiyo shanduro-based application iyo inoshandisa ruzivo rwakananga apo ichikwira kana kubvisa mapeji ewebhu..
ScraperWiki inopa rubatsiro kune nhamba yakawanda yevashandisi uye inounganidza data kubva kune chero rudzi rwewebsite kana blog. Icho hachidi chero kukopera. Zvinoreva kuti iwe unofanira kungobhadhara purogiramu yayo yepurogiramu uye purogiramu ichaendeswa kwauri kuburikidza ne email. Iwe unogona kuisa pakarepo data yako yakagadzirirwa pane imwe yefa yekuchengetedza kana yako sevha. Iyi purogiramu inotsigira zvose Google Drive neBhokisi.net uye inotengeswa seJSON ne CSV.
Scraper inonyatsozivikanwa nokuda kwezvinyorwa zvacho zvepachena uye zvinyorwa. Iyi urongwa hwekutsvaga webhu hunoita gore-based uye hubatsira kubvisa mazana kuzviuru zvemapeji ewebhu zuva rega rega. Zvimwe zvemasarudzo ayo akakurumbira ndeye Crawlera, Bot Counter Measure, uye Crawl Builder. Scraper inogona kutora webhusaiti yako yose muhutano hwakarongeka zvakanaka uye inoiisa iyo kushandiswa kwekushandisa paIndaneti pasina chaipo. Purogiramu yepurogiramu ichakubhadhara madhora makumi matatu pamwedzi.
Kukonzera Hub kune imwezve inoshamisa yehuwandu hwepurogiramu yepurogiramu inoshandiswa kuunganidza data kubva kumazana kusvika kune zviuru zvemasero. Iyi purogiramu inobatsira kubvisa uye kukamba mapeji ewebhu mumasekondi. Iwe unogona kushandisa kana kutumira mapeji iwayo muzvikwata zvakasiyana zvakadai saJSON, SQL, uye XML. Iyo inonyatsozivikanwa nokuda kwekushandura kwayo-yakagadzirisa, uye hurongwa hwepamberi hunokutora iwe unenge uine $ 50 pamwedzi uye unogona kusvika kune 100k yepamusoro mapeji ewebhu.